केपी ओली र शेरबहादुर तामाङ- ३० वर्षपछि दोहोरिएको रोचक संयोग ! – Nepal Press
केपी ओली र शेरबहादुर तामाङ- ३० वर्षपछि दोहोरिएको रोचक संयोग !
२०७८ वैशाख १० गते २०:१७
उनले नेपाल प्रेससँग भने- यो मेरो लागि ३० वर्षपछि जुरेको संयोग पनि हो । अध्यक्ष कमरेडले दिएको जिम्मेवारी मेरो लागि अवसर र चुनौति दुवै हो । अहिले पार्टी जटिल मोडमा छ । नयाँ कार्यालय निर्माण गर्ने, नयाँ ठाउँमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, देशभरका पार्टी कार्यालय र सम्पतिको संरक्षण गर्ने जस्ता ठूला-ठूला दायित्व छन् । म मेरो जिम्मेवारीप्रति सजग छु ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख १० गते २०:१७